Johanssen Obanda - AfricaArXiv
By Johanssen Obanda, 7 andro 1 andro lasa izay
By Johanssen Obanda, 1 volana 1 volana lasa izay
By Johanssen Obanda, 2 volana 1 volana lasa izay
By Johanssen Obanda, 3 volana 3 volana lasa izay
By Johanssen Obanda, 4 volana 4 volana lasa izay
AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, ary PREreview dia manambatra hery hampivondrona ireo mpahay siansa manerana an'i Afrika ary ireo mpahay siansa dia nanao fikarohana mifandraika amin'ny Afrikana ho an'ny andiany dinika virtoaly 3 sy ny fijerin'ny mpiara-miasa.
Ny TCC Africa sy Eider Africa dia miara-miasa amin'ny mpikaroka mpikaroka momba ny asa voalohany avy any Sub Sahara Africa
Raha mpikaroka ianao dia mety hainao tsara ny lalan-dàlan'ny fikarohana sy ireo fanamby sy fotoana mety mifanaraka aminy. Vaovao tsara raha mpikaroka avy any Afrika Atsimon'i Sahara ianao satria ny mpiara-miasa aminay, TCC Africa sy Eider Africa dia nanambara ny fiaraha-miasan'izy ireo hanome tolotra. Hamaky bebe kokoa…
By Johanssen Obanda, 5 volana 4 volana lasa izay
Fikarohana ireo fomba fanao amin'ny famoahana boky any Afrika
Ny University World News dia namoaka tatitra mitondra ny lohateny hoe Fianarana manasongadina ny ahiahy momba ny fomba famoahana, maneho ny fanamby atrehin'ireo mpikaroka Afrikanina Sub-Sahara izay mitarika lahatsoratra vitsivitsy naverina nodinihina navoaka tao amin'ny indostrian'ny fanontana an-tserasera avy amin'ny kaontinanta afrikanina.
Ny fanambin'ny fahitana azy
Ny AfricaArXiv dia miasa miaraka amin'ny Open Knowledge Maps mba hampitomboana ny fahitana ny fikarohana Afrikana. Ao anatin'ny krizy tsy ahitam-bahaolana dia hampandroso ny siansa misokatra sy ny fidirana misokatra ho an'ny mpikaroka afrikanina manerana ny kaontinanta afrikanina ny fiaraha-miasanay. Amin'ny antsipiriany, ny fiaraha-miasa ataonay dia: hampiroborobo ny fikarohana afrikanina manerantany Foster Open Hamaky bebe kokoa…
By Johanssen Obanda, 5 volana lasa izay